Kedu ụzọ iji nweta WordPresslinklinks?
A na-akpọkwa ndị backlinks dị ka ndị inbound ma ọ bụ njikọ na-abata. Ejikọtara njikọ ndị a n'otu ibe weebụ ma na-atụ aka na nke ọzọ. Site n'iwelite ọnụ ọgụgụ nke njikọ ndị na-abata, ị na-azụlite mgbasa ozi saịtị gị. Ọ bụ ya mere ọ bụ ụzọ zuru okè iji gbasaa okporo ụzọ nke ebe nrụọrụ weebụ ma mee ka ọ mara ya n'etiti ndị ọrụ. Ọnụ ọgụgụ na àgwà nke backlinks bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa maka Google. Ọ bụ ya mere webmasters ji eji azụmaa iji mee ka ọnọdụ ntanetị dị elu ma mee ka ebe nrụọrụ weebụ karịa SEO-enyi na enyi. Ọ bụrụ na e gosipụtara saịtị site na ọtụtụ backlinks, ọ ga-abụ ndị ọkachamara ga-enyocha ya.
Gịnị bụ ihe mere ị ga-eji nyefee WordPress backlinks?
Nnukwu na ogo nke backlinks bụ otu ihe dị mkpa na njikarịcha search engine. Njikọ ndị dị n'èzí nwere ụfọdụ uru na njikarịcha weebụsaịtị site na ịdọta ndị ọbịa ọhụrụ na saịtị yana site na ịbawanye okporo ụzọ na ibe weebụ gị. Ha na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere ndị na-eso ụzọ aka ma na-azụlite ikike aka. Ọzọkwa, njikọ dị n'ime ya bara uru na n'echiche na ọ na-eme ka saịtị ahụ na-arụ ọrụ ma na-ejikọta saịtị ahụ na netwọk ndị ọzọ.
Olee otú iji tinye backlinks na WordPress?
Webmasters ndị na-agba ọsọ ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ n'otu oge nwere ike ime ka azụlinks zuru oke iji jikọọ saịtị ọ bụla. Ọ bụ ụzọ zuru oke iji mee ka okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere mmetụta na mgbagwoju anya iji mepụta backlinks n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ ya mere anyi ji ezukọta maka ndụmọdụ ụfọdụ bara uru ga-enyere gị aka ịmepụta ezigbo backlinks na WordPress:
Exchangelinks na saịtị ndị ọzọ
Ụzọ kachasị mfe na ụzọ mepụta backlinks dị mkpa bụ iji gbanwere ha na saịtị ndị ọzọ. Ị nwere ike ị kpọtụrụ webmaster na niche gi ma guzosie ike na ya mmekọrịta ndị bara uru. Ị nwere ike ịrịọ ya ka ị debe backlinks gị na saịtị ya na ọnọdụ ị ga-eme otu ihe ahụ maka ya. Nke a win-win technique adabara ma gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọ dị mkpa ịgwa ndị ahịa gị nwere ike ịkọ banyere akwụkwọ akụkọ gị na mgbanwe na azụmahịa gị. Ịkwesịrị ịkọwa ozi a n'oge na-adịghị anya ma jiri aka ya ma kesaa ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị iche iche. A na-ebipụta akwụkwọ akụkọ ọma nke ọma site na ụfọdụ n'ime saịtị mgbasa ozi dị elu nke nwere ike ịgwọ gị dịka onye edemede na backlinks maka n'efu.
Nlereanya nke ngwaahịa
Ụzọ ọzọ a ga - esi rụọ njikọ bụ ide ederede maka ihe onwunwe ma ọ bụ ọrụ ị na - enwe ekele dị ukwuu. Ọ bụrụ na nyocha gị na-agbaso ụkpụrụ ndị achọrọ, ọ nwere ike gosipụta ya na weebụsaịtị. N'ihi ya, onye edemede ahụ ga-enwe njikọ azụ azụ dị mkpa. Nkọwapụta ngwaahịa nwere njikọ nye ndị dere ha nke mepụtara ha ma mee ka eziokwu bụrụ eziokwu.
Jiri usoro mgbasa ozi mgbasa ozi
Ị nwere ike inweta uru site na iji usoro mgbasa ozi dị otú ahụ dị ka Twitter, Facebook, Twitter, Google+ na ndị ọzọ. Ị nwere ike ịmepụta ebe azụmahịa gị ma gbakwunye njikọ ya na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ gị. Iji mee ka ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịnweta, ịkwesịrị inye ndị ahịa gị ihe dị ọhụrụ ma dị mkpa nakwa yana dị iche iche inye onyinye, egwuregwu, vidiyo, na infographics Source .